Afar arrimood oo ku saabsan mashaqada haysata Muslimiinta Rohingya - BBC News Somali
Image caption Qaxooti qaxaya
Qaramada Midoobay waxay ku tilmaantay duullaanka Rakhine ee dhaliyey qaxa xoogga leh inuu la mid yahay "tusaalayaasha buugaagta ku qoran ee isir sifaynta".
Image caption Qaxootiga muslimiin ayey u badan yihiin
Image caption Rohingya waxay ka cararayaan isir sifayn
Dadka Rohingya ee imaanaya deegaanka loo yaqaanno Cox's Bazaar - oo ah degmo ku taalla Bangladesh - ayaa sheegaya inay ka soo carareen askarta oo ay taageerayaan dad caraysan oo Buddhist ah, kuwaasoo jawaabta ay bixinayeen ay ahayd inay tuulooyin gubaan, dad rayid ahna ay weeraraan oo ay dilaan.
Xukuumaddu waxay sheegaysaa in "hawlgalka lagu nadiifinayo" mintidiinta uu dhamaaday 5tii Siteembar, laakin wariyeyaasha BBC waxay arkeen caddaymo muujinaya inay sii socdeen taariikhdaas ka dib.
Muuqaalka ayaa muujinaya meelo badan oo ay ku yaalleen tuulooyinka Rohingya oo baaba'ay, halka tuulooyinka kale ee Rakhine ay yihiin kuwo aan la taaban.
Human Rights Watch waxay sheegtay in burburka badankiis uu ka dhacay magaalada Maungdaw muddadii u dhaxaysay 25 Agoosto - 25 Siteembar, halkaasoo tuulooyin badan lagu burburiyey wixii ka dambeeyey 5 Siteembar, markii hogaamiyaha Myanmar, Aung San Suu Kyi, ay sheegtay in hawlgalkii ciidanka amniga uu dhamaaday.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in xaaladda Rohingya ay tahay "mushkiladda qaxooti ee ugu xawliga badan dunida".
Qaxootiga gaaray Bangladesh badankood - kuwaasoo isugu jiray rag, dumar, iyo carruur aan waxba sidan - ayaa goobahaas ka raadsaday meelo ay galaan, waxayna teendhooyin ka samaysteen meelaha suurto galka ah ee ku yaalla dhulkaas adag, ayagoo aan haysan gargaar macno leh, biyo la cabo, cunno, hoy, ama daryeel caafimaad.
Image caption Teendho ay ku jiraan qaxootiga Rohingya
720,000 oo caruur ah ayaa u baahan gargaar bani'aadminimo sida ay UNICEF sheegayso.
500 oo tan oo gargaar ah ayaa xagga cirka lagu gaarsiiyey.
Shiinuhu wuxuu sheegay in beesha caalamku "taageerto dadaalka ay Myanmar ku dhowrayso deganaanshaha horumarka dalkeeda".
Bangladesh waxay qorshayanaysaa inay dhisto meelo badan oo ah hoy ay galaan qaxootiga oo ku yaalla Cox's Bazaar, waxayse kaloo doonaysaa inay dhaqdhaqaaqooda ku xaddiddo goobaha loo asteeyey.
Guddiga Masiibooyinka degdegga ah ee UK ayaa qaaday codsi uu ku doonayo dhaqaale lagu caawiyo qaxootiga iyo qowmiyadaha ay dul dageen ee ay culayska ku yihiin. Ra'iisul wasaare Theresa May waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay in falalka milateri ee Rakhine ay istaagaan. UK waxay joojisay casharradii ay siin jirtay militariga Myanmar.